Life Style – Page5– Healthy Life Journal
စိတ်ကြည်လင်သွားစေမည့် စက္ကန့် ၆၀ လေ့ကျင့်ခန်း
———၊ လရိပ်မေ ၊——— စိတ်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေတာတွေ များနေပါသလား . . . သက်ပြင်းကို အခါခါ ချမိနေပါသလား . . . ဒီလိုဖိစီးမှုများတာကြောင့် ပိုပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်ဘဲ တစ်မိနစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာ စိတ်အပန်းပြေသွားစေဖို့...
အရေပြားက ဘယ်လိုအိုမင်းလာသလဲ . . .
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လူတွေရဲ ့အသားအရေက ပြောင်းလဲလာပြီး အိုမင်းလာပါတယ်။ အရေပြားက အိုမင်းလာချိန်မှာ ပျော့ပျောင်းသန်စွမ်းမှုနည်းပြီး ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းအားလည်း နည်းနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ အရေးကြောင်းတွေထင်တဲ့အပြင် တခြားအိုမင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို အရေပြားအိုမင်းစေတဲ့...
———၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊——— ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းလိုသူတွေအနေနဲ့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ဝစေနိုင်တဲ့အချက်တွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ (၁) မစားခင် အညွှန်းကို ဖတ်မကြည့်ခြင်း အစားအသောက်တွေကို ပုံမှန်စားနေပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်မလာတဲ့သူတွေ ရှိနေသလို အစားအသောက်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး စားနေပေမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျမသွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကွာခြားလို့လဲဆိုတာ...
———၊ လရိပ်မေ ၊——— (၁) ငါးကြေးဆီ ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျစေဖို့ တစ်နေ့တာအတွင်း ငါးကြီးဆီတစ်တောင့် – နှစ်တောင့်ကို မှီဝဲပါ။ မက်ကရယ်ငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ သစ်ကြားသီး၊ နှမ်းကြတ်စေ့၊ ကြက်ဥအနှစ် စတာတွေမှာ ငါးကြီးဆီပါဝင်ပါတယ်။ (၂) ဗီတာမင်ဘီအုပ်စု ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုပါဆေးကို...
ကလိထိုးတဲ့အခါ ဘာကြောင့် လူတွေရယ်မောကြတာလဲ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တကယ်ဆိုရင် ကလိထိုးခံရတာက လူအများစုအတွက် အလွန်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအခြေအနေမှာ ရယ်ချင်ကြပါတယ်။ ဟာသဇာတ်ကားကြည့်ရသလို ရယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မသက်မသာ ရယ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ကလိထိုးလိုက်တဲ့အခါ အရေပြားရဲ ့အပေါ်ဆုံးအလွှာ (Epidermis)...
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် လူငယ်များအတွက် အကြံပြုချက် ၁၀
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— (၁) အမှားတွေကို မကြောက်ပါနဲ့၊ အမှားကနေ သင်ခန်းစာယူပါ။ (၂) ကိုယ့်ခံစားချက်ကို သိနားလည်ပါ၊ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ဖွင့်ဟပြဖို့ ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့။ (၃) ပြောဖို့ထက် များများနားထောင်ပေးပါ၊ မေးခွန်းကောင်းတွေ မေးမြန်းပါ။ (၄) ဆင်ခြေပေးနေမယ့်အစား ကိုယ့်မှာရှိတာလေးနဲ့...
Page5of 256‹ Previous123456789Next ›Last »